9 11 အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary »911 အမှတ်တရ
9 11 အမှတ်တရ
Posted by ဆူး on Nov 21, 2010 in My Dear Diary | 12 comments
9 11 အမွတ္တရ ဆူး စိတ္ကူး
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးပေါ့..ကမာ္ဘလုံးကလည်း သိကြပါတယ်။ ထိုုဖြစ်ရပ်လေးနဲ့ တချိန်တည်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမသိသူမသိ ဖြစ်ရပ်လေးကတော့ ဘယ်သူမှလည်း မသိသလို အနီးအနားက လူတွေလည်း သိကြမယ် မထင်ဘူး။ အဲဒီနေ့မှာ.. ဆူး အဖေက ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ ဆေးခန်းသွားပြတဲ့ အချိန် အိမ်မှာ တယောက်တည်း ရှိနေခဲ့တဲ့ အချိန်ပေါ့.. အိမ်သားတွေကလည်း မရှိ.. အိမ်မှာလည်း တယောက်တည်း.. အင်တာနက်ကလည်း မသုံးတတ်သေးတော့.. စလောင်းကလာတဲ့ တရုတ်ကားကို အားကိုးတကြီး ကြီးနေရတာပေါ့.. မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီ ဇတ်လမ်းက အပိုင်း ၁၀ဝ ကျော်သွားတယ်.. နာမည်လည်း ကြီးတယ် တရုတ်လိုင်း Phoenix မီးငှက်လို့ ဘာသာပြန်ရမလား မသိဘူး.. ထိုလိုင်းက ညနေဘက်ဆို လာနေပြီ.. ထိုကားလာတော့ အိမ်မှ တယောက်တည်း ရှိလည်း ကိစ္စမရှိဘူး.. မပျင်းရဘူးပေါ့.. ဒီတိုင်းဆို ပျင်းမှာသေချာသည်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့.. အိမ်အသစ်ကြီးကို ပြောင်းလာတာ မကြာသေးဘူး.. ပြောင်းလာတာ ၁လဘဲ ရှိသေးတယ်။ အိမ်နဲ့ နေသားမကျသေးသလို သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းကလည်း မရှိ.. ၁ဝတန်းကလည်း ဖြေပြီးခါစ ဆိုတော့.. တနေ့တနေ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ပြီး အပျင်းဖြေရတယ်။
အကြောင်းအရာ တခုကို အရင်ပြောသင့်တယ်ထင်တယ်။ အဖေက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကလေးတွေကို နို့ဆီ ခဏခဏ ပြုတ်ကျွှေးတယ်။ နို့ဆီဘူးကို ရေနွေးနဲ့ ပြုတ်ပြီး ကျွေးတာပါ။ ထိုနို့ဆီပြုတ်က အညိုရောင်သန်းနေပြီး ချောကလက်လေးလိုဘဲ ကော်စားလိုက်ရင် အရသာ အီစိမ့်သွားတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စားနေကျမို့လား.. အရသာ ကို သဘောကျ နှစ်သက်သည်။ နို့ဆီပြုတ်တယ် ဆိုတာကလည်း ရေနွေးနဲ့ နာနာပြုတ်ရတာပါ.. အပြုတ်မနာရင် နို့ဆီပြုတ်က ပြစ်ပြစ် စည်းစည်း အရသာ မဖြစ်ဘဲ.. သာမာန် နို့ဆီနဲ့ သိပ်မကွာခြားသလို အရသာလည်း ပိုမလာပါဘူး။ ထိုနိုဆီပြုတ်ကို ပေါင်မုန့်နဲ့ သုတ်ပြီး ကျွှေးနေကျပါ။
ထိုနေ့က နို့ဆီ ပြုတ်ထားပါတယ်။ နို့ဆီပြုျတ်အိုးမီးဖွင့်ပြီး အိမ်ရှေ့မှာ ရုပ်ရှင်ဇတ်ရှိန်မြင့်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့.. နောက်ဖေးက မီးပြန်ပိတ်ရမှာမေ့သွားတယ်။ နို့ဆီပြုတ်ရင် ထည့်ရတဲ့ ရေတောင် ခန်းသွားပြီ ဒါလည်း မသိသေးပါဘူး.. ရုပ်ရှင်ကောင်းနေတယ်။ အမှန်တော့ နဲနဲ အပူလေးပေးပြီး မီးပြန်ပိတ်ထားမလို့ စဉ်းစားနေတာပါ။ ရင်ရှုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ မြောသွားလို့.. ဘာမှကို သတိမဘဲ.. နေရင်းနဲ့ ရုပ်ရှင် မပြီး တပြီးမှာ.. အိမ်နောက်ဖေးက **ဘုန်း** လို့ ပြောရမလား **ဖုန်း* လို့ ပြောရမလားဘဲ… တော်တော်ကျယ်တဲ့ အသံကြီး နားထဲမှာ ကြားလိုက်တာနှင့် တပြိုင်နက်.. လူပါ သိမ့်ခနဲတုန်သွားတယ်။ ခေါင်းထဲမှာ တချက် သတိရလာတယ်.. အသိနှင့်အတူ.. အိမ်နောက်ဖေးကို ပြေးသွားခဲ့တယ်။ ထို အသံကို ဘယ်သူမှ ကြားမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. အိမ်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင် ခြံတွေက ဘယ်သူမှ မနေသေးပါဘူး… အိမ်နောက်ဖေး အရောက်မှာတော့.. အရမ်းကို အံဩ တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်နဲ့ အတူ.. ဘာက စပြီး လုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ မြင်မြင်လေသမျှ အိမ်နောက်ဖေး တခန်းလုံး အမိုးနဲ့ ဘီဒိုတွေမကျန်.. စက်ကွင်းတခုလုံး.. နို့ဆီတွေ လူးထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီး မီးဖိုမီးကလည်း ဖွင့်လျက်သား.. ထို့အပြင် နို့ဆီဘူး ပြတ်စ တွေ ပြန့်ကျဲပြီး ထည့်ပြုတ်တဲ့ အိုးကလည်း မဲခြိတ်ပြီး တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးပြီး ပုံပန်းမကျတဲ့ အိုးတလုံး အဖြစ်နဲ့ မျက်စိရှေ့မှာ ကျနေတယ်။ အပြေးအလွားလာရင်းနဲ့ အရင်ဆုံး ဖိနပ်စီးပြီး ဝင်မယ်ဆိုတော့. ဖိနပ်တွေလည်း နို့ဆီတွေနဲ့ သွပ်အစတတွေ ပေကျန်နေတယ်.. ဒါနဲ့ ဟိုကျော်ဒီခွ.. မီးဖိုခလုပ်အရင်ပိတ်.. ပြီးမှ.. ရေနဲ့ ဆေးချ ရတော့တာဘဲ.. ရေနဲ့ ကြမ်းပြင်ဆေးချတာကတော့ လွယ်ပေမဲ့ အသုံး အဆောင် ဘီဒိုနဲ့ ခေါင်မိုးတွေပါ လိုက်သုတ်ဖို့ က ထင်သလောက်ကို မလွယ်ဘူး။ ခေါင်းမိုးက မြင့်တော့.. စားပွဲပေါ် ခုံ နှစ်လုံး ဆင့်ပြီး တက်သုတ်ရတယ်။ အဖေ နဲ့ အမေ ပြန်မလာခင် သုတ်ဖို့ စိတ်ကူးပေမဲ့.. အိမ်ခန်း တခန်းလုံး သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေရင်း တန်းလန်း အချိန်မှာ ကားဟွန်းသံကြားရပြီ.. ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ.. သေချာပေါက်တော့ အဆူခံရမှာ သေချာနေပြီ။ မဝင်လာနဲ့ ပြောလို့လည်း မရ.. စိတ်ထဲမှာ ဗျာများနေတယ်။ ဘာအရင် လုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ အိမ်ရှေ့ကို ပြေးထွက်သားပြီး ခြံတခါးကို ရင်တုန်တုန်နဲ့ ဖွင့်ပေးပြီး ကားပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ အဖေနဲ့ အမေကို မျက်နာချိုသွေးပြီး.. မချိုမချဉ်မျက်နှာနဲ့.. အမေ့… အဖေ့.. သမီး ပြောစရာ ရှိတယ်.. အိမ်ထဲ ဝင်ခင် ရပ်ပြီးတော့.. နောက်ဖေးမှာ.. နို့ဆီဘူး အပူလွန်ပြီး ပေါက်ကွဲသွားတယ်။ သမီး အဲဒါ သုတ်နေတယ် ဆိုပြီး မျက်လုံး အဝိုင်းသားနဲ့ ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ ဟင် ဟုတ်လား.. ဒါနဲ့ နောက်ဖေးလိုက်ကြည့်ကြတယ်။ နောက်ဖေး က မြင်ကွင်းကို မြင်တော့ တော်တော် စိတ်ပျက်သွားကြတယ်။ သို့သော်.. အားလုံး တက်ညီ လက်ညီနဲ့ ဝိုင်းပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြရတာပေါ့။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေတုန်းမှာ.. အဖေကတော့ သတင်းလေး ဘာလေး ကြည့်ပြီး တခု လှမ်းပြောတယ်။ အမေရိကန်က World Trade Center လေယာဉ်ဝင်တိုက်ခံရတယ်တဲ့။ စိတ်တော့ သိပ်မဝင်စားနိုင်သေးဘူး။ အိမ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေရတာနဲ့.. အဖေက အချိန်ကို ပြောပြီး သိလား.. မေးတော့..မသိဘူး အခုမှ သိတာ.. ပြန်တွက်ကြည့်တော့ အဲဒီ အချိန် ရုပ်ရှင် ကြည့်နေတာ.. ဇတ်လမ်းက ပြီးခါနီး နို့ဆီဘူးပေါက်တဲ့ အချိန်နဲ့ ထပ်တူကျနေမလားဘဲ။ ယူအက်မှာ တိုက်နှစ်လုံး ပျက်စီးသွားပေမဲ့.. ဆူး အိမ်ကတော့ မပျက်ဆီးလို့ တော်ပါသေးတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုလေး သတိရလို့ ထုတ်ရေးလိုက်ပါတယ်။
အမလေး ဆူးရယ် …. ဆူးနေတဲ့အိမ်ထဲ အစွန်းရောက်အုပ်စုကများ ဝင်လာသလားဆိုပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖတ်လိုက်ရတာ …
အဖျက်သမားကတော့ ဆူး ပေါ့.. အဟင့်.. အခု တွေးမိရင် အခု စိတ်မကောင်းဘူး.. သုတ်လိုက်ရတာ သိပ်မောတာဘဲ.. သိပ်လည်း မငြီးရဲဘူး.. တော်ကြာ.. အဆူ ခံနေရမှာ စိုးလို့..
ဖီးနစ်ငှက်ကို မီးပုံထဲမှပြန်လည်နိုးထလာသောငှက်လို့ ဘာသာပြန်လို့ရမယ်ထင်တယ်။
ဆူးပြောတဲ့ နို့ဆီပြုတ် လုပ်စားကြည့်ပါအုံးမည်။
စက်တင်ဘာ အလဲဗင်နေ့တုန်းက ကိုကြောင်ကြီးညဖက် ဂြိုလ်တုစလောင်း သတင်းကြည့်နေတုန်း တွေ့လို့ ထိုင်ရာမထဘဲ ကြည့်ပါသည်။ တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ တိုက်ကြီးနှစ်တိုက် မီးလောင်နေတာပဲ ပြနေလို့ အိမ်အောက်ဆင်းပြီး ငပွကြီးလုပ်ပါတယ်။ အိမ်နီးနားချင်းများ နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတ ပြည့်ဝပုံများ ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်တစားမရှိလို့ ဒေါကန်ပြီး ပြန်လည်းတီဗွီရှေ့ရောက်ရော ဟာလာဟင်းလင်းပြင်ကြီးပဲ တွေ့ရပါတော့သည်။ ပွဲကြီးပွဲကောင်း လိုက်ဖ်ရှိုးလွတ်သွားခဲ့ပါသည်။
သူများတွေ အလန့်ထညက် ဖြစ်တဲ့ အချိန် အိမ်သန့်ရှင်းရေး အထူးလုပ်တဲ့ အချိန် ဖြစ်နေတာပေါ့..
ဇဝေဇဝါနဲ့… ဇတ်လမ်းပမာလာနေတယ်မှတ်နေတာ..။ တကယ်ပြောတာ..။
စာရင်းချုုပ်တော့ ..မြန်မာပြည်မှာလည်း … နိုဆီဗုံးပေါက်သကိုး…
နို့ဆီ ဗုံးကတော့ မပြောပါနဲ့.. ရေဘယ်လောက် လောင်းလောင်း နို့အရောင် ထ နေတာဘဲ.. ရေလည်း ကုန် လူလည်းပန်း.. မောကြော တော်တော် ဆိုက်တယ်။ အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးကျူး.. အမှတ်တရ ပင်ပန်းခဲ့တာ ဝင်ရေးတာ။
အတော်ဘဲ လိုက်ရှာနေတာ အခုမှ တွေ ့တယ်…. ဗုံးလုပ်နည်း ဟီး ဟီး ဟီး
နို့ဆီပြုတ်စားကြည့် အရမ်းစားကောင်းတယ်။ အရသာ အီစိမ့်ပြီး ချိုချိုလေး.. အရောင်က အညိုရောင် အနည်းငယ်သန်းတယ်။ နို့ခဲသကြားလုံးတွေ ငုံထားပြီး တမြုံမြုံစား တတ်တဲ့ သူတွေဆို တကော် ကော်ပြီး ငုံထားရင် တစိမ့်စိမ့် တတွေးလေးနဲ့ မြုံပြီး ရေလေးသောက်လိုက် ငုံထားလိုက်နဲ့ အရသာရှိတယ်။ မယုံရင် လုပ်စားကြည့်.. နည်းပညာ ပါပြီးသားဆိုတော့ ထပ်မရှင်းတော့ဘူးနော်
အော် ဖြစ် ရ လေ မဆူး ရေ …. ဒါ နဲ. မိုဘိုင်း မြို. ဗုးံ ကွဲ တုးံ က ကော ဘာ တွေ ဖြစ် သေး လဲ ဟင် .. ဟီး ဟီး …
The Reds (ဦးနီ) မိုဘိုင်းမြို့ ဗုံးကွဲတုန်းက ဘယ်နေ့မှန်း မသိလိုက်လို့.. ဘာဖြစ်လဲ မမှတ်မိဘူး။